भारतको सिको गर्दै जापानद्वारा पनि टिकटकमाथि प्रतिबन्ध ! - Himali Patrika
भारतको सिको गर्दै जापानद्वारा पनि टिकटकमाथि प्रतिबन्ध !
हिमाली पत्रिका १६ साउन २०७७, 1:05 pm
१४ किलो चाँदी र आधा किलो सुन प्रकरण रहस्यमय बन्दै गएको छ। सुन प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा घटनास्थल नक्कली बनाएको खुलेपछि घटना शंकास्पद बनेको हो।
सो प्रकरणपछि प्रहरीमाथि नै प्रश्न उब्जिन थालेको छ।लोकप्रिय भिडियो शेयरिङ एप टिकटकमाथि जापानले समेत प्रतिबन्ध लगाउने सम्भावना बढेको छ ।
जापानको सत्तारुढ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीका सांसदहरुले टिकटकमाथि बन्देज लगाउने कदम अगाडि बढाउने निर्णय गरेका हुन् ।
जापानी प्रयोगकर्ताका डाटाहरु अन्ततः टिकटकमार्फत् चिनिया सरकारको हातमा पुग्ने गरेको भन्दै आलोचना भएसँगै जापानको सत्तारुढ दल टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सोँचमा पुगेको बताइएको छ ।